Wararka - Xilliga miro guduudka ah, Fiirsooyinka jaalaha ah ee qasacadaysan oo dhadhan leh waa lama huraan
Xilliga miraha huruudda ah, ferskenka jaalaha ah ee qasacadaysan waa lama huraan
Miro guduud ah oo qasacadaysan waa cunto qasacadaysan oo laga sameeyay fersken huruud ah oo cusub. Waxay hodan ku tahay fitamiin C, fiber iyo carotene oo uu u baahan yahay jirka bini'aadamka. Waxay diyaar u tahay inay cunto cunto. Xilliga xagaaga kulul, si fiican ayuu u dhadhamiyaa qaboojiyaha kadib.
Hadda waa xilli kale oo miro guduud ah Miro guduud ah oo qasacadeysan ayaa dhadhan fiican leh, laakiin sida ay warshadda fersken ee qasacadaysan u samayso. Bal aan eegno.
Doorashada alaabta ceeriin
Dooro fersken huruud ah oo tayo sare leh oo leh bislaansho 8.5%, cusub oo cufan, oo aan lahayn cayayaan, cudurro, iyo waxyeello farsamo, iyo dhexroor ah 5 cm ama ka badan.
UtQo oo qod xudunta
Iska yaree fershka jaalaha ah laba qaybood oo dherer ahaan ku teedsan. Ha qalloocin oo ha keenin qaybo waaweyn ama yar yar. Ka dib marka miro -beelka jaalaha ah la gooyo badh, ku qoy xaleefyada jaalaha ah 2% biyo milix ah si aad u ilaaliso midabka. Isticmaal digger si aad uga qodato godadka miro guduudka ah qeybta barafka ee jaalaha ah. Godadka fersken waa in ay ahaadaan kuwo siman oo oval ah, laakiin midhaha waa in aan la qodin ama la burburin. Hilibka gaduudan wax yar baa laga tagi karaa. Ka dib marka la qodo xudunta, waa in lagu qooyaa alkali waqtiga, ama lagu qooyaa biyo cusbo 2% si loo ilaaliyo midabka.
ElingDilinta iyo biyo raacinta
Ku faafi xaleefyada miro -dhalinta mashiinka mashiinka gubashada alkaliin oo ku jira hal lakab oo leh godadka asaasiga ah ee hoose, si diirku si buuxda ugu soo baxo liinta. Cufnaanta lye waa 6% ilaa 12%, heerkulkuna waa 85 ilaa 90 ° C. Wakhtiga daweyntu waa 30-70 ilbidhiqsi, ka dibna ku mayr lye biyo nadiif ah.
Ku rid lugaha la dhaqay xal kulul oo ay ku jirto 0.1% citric acid oo ku xaji 90-100 ℃ 2-5 daqiiqo ilaa miro guduudku ka muuqdo. Ku qabow biyo qabow isla markiiba ka dib markaad faaruqdo.
⑤ Jaridda iyo qasaca
Isticmaal mindi fiiqan si aad u gooyso dhibcaha iyo qashinka haraaga ah ee dusha sare ee miro guduudka. Jeexyada miro guduudka ah ee la jarjaray ayaa lagu buuxiyay gasacadaha iyadoo loo eegayo midabada iyo cabbirrada kala duwan. U fiirso amarka dheecaanka, iyo mugga qasacadu waa inuusan ka yarayn 55% miisaanka saafiga ah. Isla markiiba buuxinta, ku shub biyo sonkor kulul oo ka sarreeya 80 ° C oo leh 25% -30%, kuna dar 0.1% citric acid iyo 0.03% iso-Vc.
X Qiiqa oo shaabadayn kara
Kuleyliyaha kuleylka ku rid sanduuqa qiiqa, oo si degdeg ah u xir qasacadda marka heerkulka asaasiga ahi yahay 75 ° C. Ama qiiqa faaruqinta, darajada faaruqintu waa 0.03 ～ 0.04MPa
⑦ Madhalaysnimada iyo qaboojinta
Ku nadiifi biyo karkaraya 10-20 daqiiqo, ka dibna qabooji ilaa 38 ° C.
Waxaan arki karnaa habka guud ee miro guduud ah ee qasacadaysan ee kore. Haddii uu jiro khalad, fadlan noo soo sheeg.
Waxaan ka heli karnaa xagga sare, wax soo saarka fersken jaalaha ah ee qasacadaysan,
Soo-saarka hore, waxaan u baahanahay
Mashiinka Dhaqidda Xumbada
Mashiinka Goynta (Half)
Mashiinka Buufinta Lye
Mashiinka Karinta Ka Hor
Xulashada Suunka Gawaarida
Mashiinka Dhaqidda (Si aad timaha uga saarto)
Khadka qasaca, waxaan u baahanahay:
Madhan Baahin karaa Mashiinka
Mashiinka Buuxinta Isbaarada Jaalaha ah
Tunnel -ka Pasteurization
Khadka xirxirida, waxaan u baahanahay:
Mashiinka Qeexida (Buuxin Kara)
Mashiinka xirxirida kartoonka
Mashiinka wax lagu xiro kartoonka
Haddii aad qorshe u leedahay inaad samayso cunto qasacadaysan, ku soo dhawow inaad wax weyddiiso, waxaan ku siin karnaa xalka oo dhan.
Waqtiga dhejinta: Aug-13-2021